Kandidà Rajoelina: “Tsy mandainga ary tsy mamitaka izany isika …” | NewsMada
Kandidà Rajoelina: “Tsy mandainga ary tsy mamitaka izany isika …”
Nihazo ny tany Ampanihy sy tany Ambovombe Androy indray ny dian’ny kandidà Rajoelina amin’izao fampielezan-kevitra izao. Nanome toky ny vahoaka ny tenany tamin’ny lahateniny.
“Matokia ahy ianareo … Tsy mandainga sy tsy mamitaka ary tsy mangalatra izany Rajoelina Andry. 36 ny kandidà, saingy mila tanora mavitrika sy vonona ary mahavita azy sy tia tanindrazana ny firenena. Matoa aho tonga eto, hampandroso an’i Madagasikara”, hoy izy tao amin’ireo toerana ireo. Notsiahiviny fa tsy maintsy mandresy ny miaraka aminy satria resiny avokoa ireo nifaninana taminy fony fahazaza nanaovany “karate”. “Mino sy matoky aho fa handresy isika miaraka amin’ny vahoaka”, hoy ihany izy… Notsindriny fa naka bahana ny tenany nandritra ny dimy taona ary nanomana ny hanavotana ny firenena…
Fampandrosoana anaty fotoana fohy…
Tsy fahefana na vola na voninahitra ny tadiavina fa ny hanavotana ny vahoaka malagasy, araka ny nambarany. Nanteriny, tahaka ny efa nivoizany izany tamin’ny faritra hafa, fa hovitaina ao anatin’ny fotoana fohy ny fampandrosoana tsy hita teto hatramin’izay.
Nitanisa ny vina hoentiny hampandrosoana ny tenany ka anisan’izany ny vahaolana amin’ny delestazy na koa ho an’ireo tsy manana herinaratra. Hananganana orinasa hanamboatra angovo mandeha amin’ny masoandro any an-toerana ka haloa tsikelikely izany ho an’ireo tsy mbola manana. Nampanantena ny tenany manoloana ny fijalian’ny any atsimo amin’ny rano fa hahazo izany ao anatin’ny herintaona ny ankamaroan’ny fokontany, amin’ny alalan’ny fitaovana manara-penitra ary hovitaina vetivety izany. Hamboarina hanara-penitra ny kianja filalaovam-baolina ao Ambovombe Androy. Hahazo fitaovana raitra hanamboarana lalana koa ny any an-toerana, raha vao lany ny tenany.
Miantso fahamalinana amin’ny hala-bato
Homena fitaovana ireo mpitandro filaminana ary hividy helikoptera 10 ny fitondrana hotarihiny ka hapetraka any amin’iny faritra iny ny iray hiadiana amin’ny asan-dahalo. Eo koa ny fametrahana vondron-kery manokana. “Hoesorina amin’ny toerany ireo mpitandro filaminana tsy mahavita miaro ny vahoaka sy ny fananany…”, hoy ihany izy.
Ankoatra izany, niantso fahamalinana ny tenany amin’ny fanisam-bato mba tsy hisy hiala fa hanara-maso izany hatramin’ny farany noho ny fiketrehan’ny sasany hala-bato.
Etsy andaniny, nitodika amin’ireo kandidà, sadasada manan-tsoratra,ny mpanorina ny IEM. “Maro ireo nirotsaka hofidina. Vonona hiatrika fifidianana matoa nirotsaka. Tsy mbola vonona ho amin’izany anefa ny sasany amin’izy ireo”, hoy izy.